सुवास नेम्वाङको चेतावनी-ओलीलाई हटाउन खोजिए एकता भंग हुन्छ « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
प्रकाशित मिति : २०७७, २५ बैशाख बिहीबार
काठमाडौं, २५ वैशाख: पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरु बैठक माग गर्दै अलग्गै भेलामा जुटेका बेला स्थायी कमिटीकै एक प्रभावशाली सदस्य सुवास नेम्वाङ भने संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर बैठकको औचित्य र आवश्यकता नरहेको बताउँदै थिए ।
तर, मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो । जनताले अस्थिरता समाप्त गर्न भनेर ५ वर्षको म्याण्डेट दिए । कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौ भन्यौं । जनताले त्यसलाई पनि हेरे होलान् । त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ । अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्टरुपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नुभएको छ, म एउटै कक्षा दोहोर्‍याइराख्ने व्यक्ति होइन । अर्थात महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन । फेरि प्रधानन्त्री हुने पनि चाहना छैन ।
यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढंगले यस्ता काममा लाग्ने ? मलाई त विश्वास छैन । तर, कता–कता चर्चा सुन्छु । तर, त्यता नलाग्दा राम्रो ।
के प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक गरेको कविता २०१९ मा अर्कैले रचेको थियो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे दिवसका दिन रचेको ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ शीर्षकको कविता प्रधानमन्त्रीका